ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် ပြင်ဆင်ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို NNER ဝေဖန်
NNER ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေကရော ဘယ်လောက်
Jul 14, 2015 03:57 AM
အာဏာရှင် နဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်ပါးစေ တွေ ကလွဲ ရင် ရိုးရိုးပြည်သူ တွေ အားလုံး က ပြုပြင်ရေး ကို သဘောကျတယ်။
Jun 21, 2015 08:51 PM
ေက ်ာခ်မွ နေရပ်- .. မွန္း သိ :
လေးပွင့်ဆိုင်မှာ“ပြောခ ျင်ရာ ပြော ဦးအောင်မင်း”ပါတယ် ဟုတ်။ အဲဒီကတည်းက “ရေစုန်မေ ျာ”ပြီဆိုတာ သိသင့်ပြီလေ။
Jun 21, 2015 06:50 PM
In this respect, I do not mean "all activities of government are good". There will be good job and bad job. If good jobs are seen, appreciation must be given. Rome can not be built withinanight and educational reforms cannot be done withinaday to be in par with international standard. It depends of quality of human resources (especially teachers) and financial resources of the country. Therefore NNER should see things inapragmatic way.
NNER : Do not try to create Utopia Educational System and Do not be slave of external forces.
They want to build up disciplined and modernized nations but they themselves are breaching all existing laws.
xxxx လည်း နိုင်ငံခြားကအထောက်ပံ့ပိုက်ဆံကိုလည်း ယူထား၊ ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလည်း မအောင်မြင်ဆိုတော့ ဆုတ်လည်းဆူး စားလည်းရူးသလို အစိုးရကိုပဲအပြစ်ပုံချဖို့ပဲရှိတော့တယ်။
ကြီးမှ နိုင်ငံရေးရူး ပိုက်ဆံရူး ရူးသွားတာ။
[လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ အယ်ဒီတာက တည်းဖြတ်ထားပါသည်။]
အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာ ကျောင်းသား ထည့်ရအောင်နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့လား။
ကလေးတွေကို လျောက်၂မြှောက်ပေးမနေပါနဲ့။ပြီးရင် သူကတော့ နိုင်ငံခြားအထောက်ပံတွေနဲ့ငြိမ့်နေတာ
ခံရတော့ကလေးတွေ။ တိုင်းပြည်ကလည်း အဖျက်အမှောင့်တွေနဲ့ပဲ။
လက်ရှိပညာရေးစံနစ်နဲ့ပဲ သေချာ စာမေးပွဲ အောင် စာတတ်အောင်လုပ်ပါအုန်း
I support Educational Reform but I do not support NNER and all its associated colleagues and organizations as they all are playing political games and ever criticizing whatever government does. They all never see things with optimistic views and what they know is just to blame and criticize.To be frank, what is happening in Myanmar is that all opposition forces or groups are ever blaming the Systems. Honestly speaking , it is not the fault of System alone. It is the fault of people themselves.
People themselves are lazy and disqualified. That is why they are ever finding fault with government.
Jun 21, 2015 02:39 PM
နိုင်ငံရေးနားလည်တဲ့သူတိုင်း ဒေါက်တာသိန်းလွင်ဦးဆောင်တဲ့ NNER ဘာလဲ ဘယ်လဲသိကြပါတယ်။
နဂိုထဲက NNER က မရိုးသားခဲ့ပါဖူး။ ပြည်သူအားလုံးက ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတာကို မဆန့်ကျင်ပါဖူး
အခုဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ပီး မထောက်ခံတာ NNER ကဦးစီးရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေပါအချက်လက်တွေပါ
ပြည်သူကို ချမပြပဲ နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပီး NNER ဘယ်သွားလဲ သူမူကြမ်းက အမျိုးဘာသာ သာသနာနဲ့ စာပေကို ဖျက်ဆီးဖို့ပထမခြေလှမ်းဆိုတာ ပြည်သူတွေသိရှိသွားလို့
ထောက်ခံမှုမရလို့ရှက်ရမ်းရမ်းပီး အပြစ်အားလုံးကို အစိုးရကိုပုံချနေတာပါ။ ဘယ်ပညာရေးစံနစ်ဖြစ်ဖြစ် အကောင်ထည်ဖော်မယ့်သူ ပါဝင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအရည်အသွေးအရည်အချင်းပြည့်ဝဖို့အရင်လုပ်ရမှာပါ။
ပညာတွေတတ်ပြီး ပကတိနဲ့ကင်းကွာပီး ပိုက်ဆံပေးထားတဲ့ နောက်ကွယ်အဖွဲ့စည်းအကြိုက်လုပ်နေတဲ့ ဒေါက်တာသိန်းလွင်ဦးဆောင်တဲ့ ပါဝင်သူအားလုံးသည် တိုင်းပြည်အတွက် ဆူးခလုတ်တွေပါ
ကလေးတွေကိုဥပေဒေကိုဆန့်ကျင့်စေတဲ့ လမ်မှားတွေကို မြှောက်ပေးတုန်းကမြှောက်ပေးပီး ဥပဒေအရအရေးယူတော့ ခေါင်းရှောင်ပီး အခုမှထအော်နေသူပါ
NNER ကိုလုံးဝအထင်မကြီးပါ မထောက်ခံပါ / NNER လုပ်တတ်တာ မသိနားမလည်တဲ့ကျောင်းသားနဲ့ ပြည်သူကို လိမ်မယ်ညာမယ်
အစိုးရလုပ်သမျှ ကန့်ကွက်မယ် အပျက်သဘောပြောမယ်။ နိုင်ငံရေးနားလည်တဲ့သူတိုင်း ဒေါက်တာသိန်းလွင်ဦးဆောင်တဲ့ NNER ဘာလဲ ဘယ်လဲသိကြပါတယ်
ထောက်ခံမှုမရလို့ရှက်ရမ်းရမ်းပီး အပြစ်အားလုံးကို အစိုးရကိုပုံချနေတာပါ။
NNER ရဲ့အရှုတ်ထုတ်ကိုသိနေတော့ အထင်မကြီးပါ
ရိုးသားသည့် ကျောင်းသားများကို သနားပါသည်
Jun 21, 2015 08:49 AM